ဂျပန်လူမျိုးနဲ့ ဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ ဘိုးဘေးတွေက တူများတူနေသလား? - JAPO Japanese News
ဂါ 03 Mar 2020, 11:04 မနက်
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ငယ်လေးဖြစ်ပြီးတော့ မြို့တော်ကတော့ ယေရုရှလင်ဖြစ်ပါတယ်။
နာဇီလူမျိုးဂျာမနီနိုင်ငံသားတွေက အဲ့ဒီမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ ဂျူးလူမျိုးတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုမျိုး ဂျပန်နိုင်ငံကနေအဝေးနေရာမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ သူတို့တွေနဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေက ဘိုးဘွားတစ်ခုတည်းကနေဆင်းသက်လာနိုင်ပါ့မလား? အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလည်း ထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။ မျက်နှာအသွင်အပြင်တွေလည်း လုံးဝကွဲထွက်နေတာကြောင့် ဒီစကားဟာဖြစ်နိုင်ပါ့မလား?
ဂျပန်စာနဲ့ ဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ စာက အတော်ကိုတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ လူမျိုး ၂ ခုက ယဥ်ကျေးမှုဖလှယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သမိုင်းလည်းမရှိတာတောင် ဘာလို့ဒီလောက်တောင်တူနေရတာလဲ?
အောက်မှာပြထားတာက ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ ပုံမှန်သုံးအခြေခံ Hebrew ဟေဗြဲဘာသာစကားလုံးတွေနဲ့ ဂျပန်အခြေခံသုံး စကားလုံးတွေကို နှိုင်းယှဥ်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်ဘာသာစကားထဲက ခန်းဂျီးဆိုတာ တရုတ်စာကနေဆင်းသက်လာတာပါ။ အဲ့ဒါတွေကနေ ဟိရဂန ခတခန တို့ဆက်ပြီးဖြစ်လာတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်ဆင်တူနေရတာလဲ?
အသံထွက်တို့ ရေးတဲ့ပုံစံတို့မှာလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ အက္ခရာလေးတွေမှာ K ဆိုရင် ခတခန နဲ့ ‘ခို’ လို့အသံထွက်တာတောင် တူပါတယ်တဲ့။
N ဆိုရင် “ノ” ၊ TS ဆိုရင် “ス” ဆိုပြီး အပေါ်အောက်လေးပဲ ပြောင်းပြန်လန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sh ဆိုရင်လည်း “シ” ကို အရှေ့အနောက်လှန်ထားတဲ့ ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
အသံထွက်တူတဲ့ စကားလုံးတွေတောင် ရှိပါတယ်။
ဂျပန် ဧကရာဇ်ကို ဂျပန်လို 帝（みかど）Mikado လို့ခေါ်ပါတယ်။ Hebrewဘာသာစကားမှာလည်း “ ミカドル” Mikadoru ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်။ “မြင့်မြတ်သော” လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ ထင်ရှားမှုတစ်ခုလို့ပြောရရင် “ဆာမူရိုင်း” ပေါ့။
Hebrew ဘာသာစကားမှာလည်း “ဆာမူရိုင်း” ဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့၊ “ထိန်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးသော” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ သီချင်း 君が代（きみがよ）Kimigayo အဲ့ဒီသီချင်းထဲမှာပါတဲ့ စာသားတွေက Hebrew ဘာသာစကားနဲ့ တော်တော်လေးကိုတူသလောက်ကိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဂျပန်စာဖတ်နိုင်တဲ့သူတွေ သေချာပေါက် ကြည့်ပေးပါအုံး
ဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ကွာပေမဲ့၊ အသံထွက်တွေကအစတူတဲ့အတွက် တစ်ပုဒ်လုံးကိုတောင် နားလည်နိုင်သလောက်ရှိပါတယ်။
Hokkaido ခရိုင်က တံငါသည်ရွာလေးမှာပို့ချပေးတဲ့ Soran ဆိုတဲ့ ဂျပန်ရိုးရာအကရဲ့ သီချင်းစာသားမှာလည်း အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကလေးလည်းဖြစ်လို့ အရမ်းနာမည်ကြီးပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ အဲ့ဒီအကကို ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နေရာအနှံ့အပြားမှာ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သီချင်းစာသားရဲ့ တစ်ဝက်ကိုတော့ ဂျပန်လူမျိုးတွေတောင် အဓိပ္ပါယ်ကိုနားမလည်ပါဘူးတဲ့။
ヤーレンYa-ren　ソーランSo-ran　ソーランSo-ran
ソーランSo-ran　ソーランSo-ran　ソーランSo-ran　。
ヤーレンYa-ren　ရော ソーランSo-ran　ရော ဂျပန်ဘာသာစကားမှာမရှိတဲ့အသံထွက်တွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ သူ့မှာ ခန်းဂျီးလည်းမရှိပါဘူး။
အဲ့ဒီနေရာလေးကို ဘယ်သူမှအဓိပ္ပါယ်ဖော်လို့မရပေမဲ့၊ Hebrew ဘာသာစကားမှာတော့ “ ပျော်ရွှင်မှုအတွက်သီချင်းဆိုမယ်” ဆိုပြီးအဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
အဲ့ဒီသီချင်းစာသားရဲ့ ကျန်တဲ့တစ်ဝက်က ဂျပန်စာနဲ့တူနေပေမဲ့၊ ငါးတွေအများကြီးဖမ်းမိလို့ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့သီချင်းဆိုမယ် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hebrew ဘာသာစကားနဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖော်ထားတာပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားအားကစားဖြစ်တဲ့ ဆူမိုဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာအမွေအနှစ်အားကစားလို့လူတိုင်းက သိနေကြပေမဲ့၊ ဆူမိုလောကမှာသုံးတဲ့စကားတွေကိုတော့ နားမလည်တဲ့သူအများကြီးရှိပါတယ်။
ဒါက Hebrew ဘာသာစကားမှာတော့ “踏み倒せ、異教徒を” “Fumitaose, ikyōto o”
“ လဲချလိုက်ပါ၊ ဘာသာမတူသူကို “ ဆိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
နောက်ထပ်ပြောရရင်၊ ဆူမိုဆိုတာ ဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့ဖတ်ကြည့်ရင် အတော်လေးထူးခြားနေပါတယ်။
Hebrew ဘာသာစကားမှာတော့シュモー Shumo- ဆိုတဲ့စကားက ဘုရားကိုရည်ဆောင်ပါတယ်။ “ သူ့ရဲ့ အမည်၊နာမတော်” ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်မှာအရင်ကတည်းက ဆူမိုကို နတ်ဘုရားကိုပွဲတွေအပ်နှံတဲ့အခါမှာကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။
နတ်ကွန်းတွေရဲ့ ဂိတ်ပေါက်ဝမှာလည်း Hebrew ဘာသာစကား
နတ်ကွန်းတွေဆီသွားတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့ ဂိတ်ပေါက်ဝတွေမှာလည်း Hebrew လိုရေးထားတာမြင်ရပါမယ်။ “トリイ” “Torii” ဆိုတာက Hebrew လို “ဂိတ်” လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ တော်တော်လေးကို ကိုက်ညီနေတာပဲနော်။ ထပ်ပြောရရင် ဂိတ်ရဲ့ အရောင်ကအနီရောင်ဖြစ်နေတယ်နော်၊ အဲ့ဒီလိုပဲ အရင်အချိန်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ ဓလေ့မှာ အိမ်တံခါးပေါက်ကို အနီရောင်ဆေးသုတ်လေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
အစကတော့ မတော်တဆတိုက်ဆိုင်မှုလေးပါ လို့ပဲထင်မိခဲ့ပေမဲ့၊ ဒီလောက်အထိတူနေရတယ်ဆိုတော့ မတော်တဆတိုက်ဆိုင်မှု မဟုတ်လောက်တော့ပါဘူး။
ဒါဆို ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ယဥ်ကျေးမှုအစဥ်အလာတွေကို လေ့လာနေတဲ့ စာဖတ်သူတို့ရော ဒီကိစ္စမှာဘယ်လိုထင်မိကြပါသလဲ?
いただきます、ごちそうさまရဲ့ လေးနက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်